Ezona bugs ziqhelekileyo kwi-iPhone 7 kunye nendlela yokusombulula | IPhone iindaba
Ezona bugs ziqhelekileyo kwi-iPhone 7 kunye nendlela yokusombulula
Imveliso egqibeleleyo ayikho (sele sibonile Iingxaki ze-iPhone 6), nangaphantsi xa sijamelene nolungelelwaniso oluchanekileyo noluchanekileyo phakathi kwehardware kunye nesoftware, uphawu lwenkampani yeCupertino. Ngesi sizathu, kwaye njengoko ixesha leKrisimesi lidlulile, sicinga ukuba uninzi lwakho lonwabele izixhobo zakho ezintsha ngendlela ekhululekileyo, Sifuna ukukuxelela ukuba zeziphi ezona ngxaki zixhaphakileyo kwi-iPhone 7 kunye nendlela yokuzisombulula. Ngale ndlela ungaqhubeka nokonwabela i-iPhone yakho ngaphandle koloyiko okanye ingxaki. Ke ungaphoswa kukudityaniswa kwezona bugs zixhaphakileyo kuzo zombini i-iOS 10 kunye ne-iPhone 7, ngaba uya kuyifumana le ikuzisela phantsi?
Masiye apho ke, masiqale sidwelise ukuba zeziphi ezona zisilelo zixhaphakileyo kwifowuni yamva nje ephehlelelwe yinkampani yeCupertino.
1 I-iPhone 7 heses (yenza ingxolo yombane)
2 Umyalezo "akukho nkonzo" uvela rhoqo
3 Iingxaki zeFowuni yoLungiso
4 Andiziboni iziphumo ezibonakalayo zemiyalezo
5 Iingxaki zonxibelelwano lweBluetooth kwi-iPhone 7
6 Ingxolo xa urekhoda cwaka ngokupheleleyo
7 Ngaba uneengxaki nge-iOS 10?
I-iPhone 7 heses (yenza ingxolo yombane)
Sijongene nenye yezona zinamandla kwaye kwangaxeshanye uninzi lweengxoxo ezingenangqondo ezichithekileyo kwi-iPhone 7. Abasebenzisi abaninzi balumkisile ukuba ingakumbi kwiintsuku zokuqala emva kokuthenga, xa isixhobo sibandakanyeka kwimisebenzi ebalulekileyo, Nokuba usebenzisa isoftware esebenzayo okanye ngasemva, kuthe cwaka ngokupheleleyo, kunokwenzeka ukuba uve ingxolo encinci yombane ephuma kwifowuni.
Nangona kunjalo, akuyomfuneko ukumisa ukujikeleza. Ukuba uyivile le nto kwi-iPhone yakho akufuneki ukhathazeke, esi sandi siqhelekile kwizixhobo ezineeprosesa ezinamandla, nokuba ziikhompyuter okanye ziiselfowuni. Isandi asihlali sikhutshwa xa umthwalo wokuqhubekeka usezantsi, kwaye ayisosalathiso salo naluphi na uhlobo lokungaphumeleli kwifowuni, kodwa yindlela yendalo apho iprosesa efanayo izibonakalisa ngayo. Thatha ixhala kule nto "iphantse ingavakali" kwaye ugcine uyonwabela ifowuni yakho. Ukuba inyani ikwenza ungoneliseki, ungayibuyisela kwiVenkile yeApple.
Umyalezo "akukho nkonzo" uvela rhoqo
Uninzi lwabasebenzisi be-iPhone 7 balumkise malunga nomhla wokumiliselwa ukuba izixhobo zabo zazingagqitywanga kublue. Oku kwenzeke ngokungacwangciswanga. Nangona kunjalo, unethamsanqa, yonke into ibonisa ukuba kungenxa yengxaki yesoftware kunengxaki yehardware kwaye inesisombululo esilula.
Okokuqala, ukuba sifuna ukubuyisela inkonzo kuya kufuneka siyicime kwakhona isixhobo, singasicima kwaye siqhubeke njengesiqhelo okanye siyiqale kwakhona ngokucinezela «Amandla + Umqulu-«. Nje ukuba kwenziwe oku ingxaki izakusombululwa kwangoko kodwa hayi ngekamva. Kwaye kuyangqinwa ukuba ibiyingxaki kwinkqubo yokusebenza, yiyo loo nto kubalulekile ukuba siqiniseke ngokuhlaziya i-iOS kuhlobo lwamva nje. Ngale nto siza kuya kuyo Useto> Ngokubanzi> Uhlaziyo lweSoftware kwaye masiqhubeke nohlobo lwamva nje lwe-iOS 10 engasenangxaki kule ngxaki.
Iingxaki zeFowuni yoLungiso
Enye ingxaki eqhelekileyo abahlangane nayo nabasebenzisi be-iPhone 7 kukuba bahlala bebona ii-EarPods kude kude ukuba ziyeke ukusebenza. Ngale ndlela, asinakho ukwandisa okanye ukunciphisa ivolumu, phakathi kwezinye izinto ezinokuthi zibekwe zii-EarPods kwiminwe yethu ngochukumiso olunye lwamaqhosha abo olawulo. Siyaqonda ukuba le ngxaki inokuphazamisa kwaye abasebenzisi baya kuqala bacinge ukuba isiphoso silele kwii-headphone.
Akunjalo, uApple uqinisekisile ukuba iphindile kwakhona umba wesoftware osonjululwe kuhlobo olulandelayo lwe-iOS 10, ke siyacebisa ukuba uphinde ukhangele ukuba loluphi uhlobo lwakutshanje lwe-iOS kwaye ukuba uyifakile, kunokwenzeka ukuba ukuba uye wasilela, awukahlaziywa. Ukuya kutshanje kwisoftware ye-iPhone kufuneka siye Useto> Ngokubanzi> Uhlaziyo lweSoftware kwaye masiqhubeke nohlobo lwamva nje lwe-iOS 10 ukuze sikwazi ukulibala malunga nokusilela kwe-iPhone 7.
Andiziboni iziphumo ezibonakalayo zemiyalezo
Enye yeengxaki eziqhelekileyo ezibangelwa kukungabikho kolwazi okanye ukungazi malunga nendlela esebenza ngayo inkqubo yokusebenza. Abasebenzisi abaninzi bakhetha ukwenza into "yokuncitshiswa kwesindululo" kwizixhobo zabo eziphathwayo. Ukusuka kule mobile bayakwazi ukulahla utshintsho oluqhelekileyo lwesixhobo, yenza ukuba ibonakale ihamba ngokukhawuleza kwaye igudile. Nangona kunjalo, ukwenza ukuba eli nqaku lisuse uninzi lweempawu zomsebenzisi kwinkqubo yokusebenza. Enye yezo zinto asiyi kukwazi ukuzibona ngakumbi ukuba sinalo msebenzi owenziweyo ziziphumo ezibonakalayo zemiyalezo yesicelo, ezo zichaze usetyenziso lwemiyalezo ye-Apple kuhlaziyo lwamva nje lwe-iOS.
Ukuyicima kufuneka siye kuyo Useto> Unikezelo kunye nokufumana "Nciphisa intshukumo". Siza kukhetha ngokulula ukhetho "Hayi" ukuze sikwazi ukuphinda sibuyele ukubonwa kwesicelo semiyalezo.
Iingxaki zonxibelelwano lweBluetooth kwi-iPhone 7
I-Bluetooth, loo mhlobo ucinga ukuba usivumela ukuba simamele umculo ngaphandle kweentambo kunye nokunye okuninzi. Nangona kunjalo, kwabanye abasebenzisi be-iPhone 7 ibiyintloko yokwenyani. Uninzi luye lwafumanisa ukuba inkqubo yokusebenza yayineengxaki zonxibelelwano Bluetooth, kunye nokucothisa inkqubo yokubhangqa kunye neApple Watch.
Ukuzama okokugqibela ukuba iBluetooth isebenze kwakhona ngendlela ezinzileyo silandela la manyathelo alandelayo: Useto> Ngokubanzi> Buyisela / Hlela kwakhona> "Cwangcisa useto lwenethiwekhi". Sifuna ukukhumbula ukuba oku kunokusetyenziselwa sombulula ingxaki ngoqhagamshelo lweWiFmna, kodwa ukuseta useto lwenethiwekhi kuhlala kulahla iiphasiwedi zamaqhosha e-iCloud, iintloni.
Ngendlela efanayo, ukuba iingxaki zakho ngeBluetooth azisombululeki ngale ndlela, kuyacetyiswa ukuba uye kwiVenkile yeApple okanye ucele ukuxilongwa ngetelefoni kwi-Apple SAT eya kuthi ibonise ukuba ngaba i-chip ye-Bluetooth yakho inengxaki.
Ingxolo xa urekhoda cwaka ngokupheleleyo
Abanye abasebenzisi abanomsindo baxele "ingxaki" encinci edla ngokungaqapheleki kwaphela. Kwaye kunjalo xa barekhoda ividiyo kuthe cwaka ngokupheleleyo nge-iPhone 7 yabo Xa udlala kwakhona ukurekhoda, kuya kuvakala ukungcola okuncinci, okujongeka njengokuphazamiseka okuthathwe yimakrofoni. I-Apple ayikuthatheli ngqalelo oku njengengxaki, kwaye inokubangelwa zizinto ezininzi.
Ngokubanzi, olu hlobo lokuphazamiseka luveliswa ngonxibelelwano ngeBluetooth yezixhobo ezinje ngeApple Watch okanye izithethi ezingenazingcingo, ezigcina ziphazamisa ukurekhoda. Ke ngoko, sicebisa ukuba ubhale phantsi ukuthula cwaka kwaye uqaphele ukuba i-iPhone yakho inengxaki, Qiniseka ukuba unqamle iBluetooth kunye neWi-Fi ukunqanda uphazamiseko olunokwenzeka kwizixhobo ezingadibenanga kakuhle. Kuyabonakala ukuba abayikhathaleli le ngxaki inkulu kwiVenkile yeApple kuba kunzima ukufezekisa okanye ukubuyisela endaweni yewaranti, kuba ihlala ibangelwa zizinto zangaphandle.
Ngaba uneengxaki nge-iOS 10?
Ukuba into onayo yingxaki nge-iOS, ungaphoswa Eyona nto ixhaphakileyo kukuhlaselwa kwe-iOS 10 kunye nezisombululo zazo.
Ngaba unengxaki ne-iPhone 7 yakho? Sazise kumagqabantshintshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ezona bugs ziqhelekileyo kwi-iPhone 7 kunye nendlela yokusombulula
Kwinqaku inombolo yesi-2, eyiyo, kwenzeka ntoni kum, hlaziya into oyifunayo kwaye uqalise kwakhona amaxesha amaninzi njengoko ufuna ukuba iya kuqhubeka yenzekile
nge-tf, kwindawo eqhelekileyo, xa umntu ophendulayo ekuphendula, ukutsiba okungenazandla kuya kwaphula indlebe yakho.
UManuel Bassanini sitsho
Kwiintsuku ezingama-30 ezidlulileyo nditshintshe i-iPhone yam ukuya kwi-6. Ndacinga ukuba ibhetri, ndiyifakile iyure kwaye ayikhanyisi. Ndizamile ukuyiqala ngokutsha kwavela iapile kodwa ukusuka apho kwalandela iscreen esimnyama. Ndizamile nge-ITunes ukuyila kwakhona kwaye akukho nto, ndafumana impazamo. Andazi ngenene ukuba ndenzeni
Phendula uManuel Bassanini
Molo, ndinayo i-iPhone 7 kwaye ngaphandle kwayo kwavela iapile encinci, kwaye ayisasebenzi, ibinebhetri engama-42% kwaye ngesiquphe ayisasebenzi, ndenza ntoni? kwakukhe kwenzeka kum
I-iphone 7 yam ishiyeke kunye nescreen kwinkqubo yokucima imigca embalwa ejikelezayo nge-360 degrees kwaye andinakwenza nto
Ndine iphone 7 endihleli iinyanga ezintathu. Ngenye imini ekuseni ndawuchola kwaye wawumnyama. Khange iphinde isebenze. Kwakunesiqinisekiso kwaye bayitshintshela kum. Okwesibini kwandigcina iintsuku ezi-3. Ibhetri isetyenziswe ngokukhawuleza okukhulu, kwaye iindleko zokuyihlawulisa. Emva koko ndachitha ngokukhawuleza kwakhona kwaye ukusuka komnye umzuzu ukuya komnye isikrini sasiblue ngokupheleleyo. Ndifumene iifowuni kodwa khange ndiziphendule. Masikhuphele ngokupheleleyo kwaye ukusuka apho ayizange iphinde ivule kwakhona. Ndithumele nje ukuba ndibange…. Ndinee-iPhones ezininzi kwaye into enje ayizange yenzeke kum.
I-iphone yam ixhomeke embindini womnxeba kwaye inike impazamo kwifowuni. Kundithatha imizuzu emi-3 ukufowuna kwakhona
IKHADI LOKUQHUBA KWIMARIO sitsho
I-iPhone yam icinyiwe ndiyise kwiziko leenkonzo ze-ICE, kwaye khange bakwazi ukundinceda, bandixelele ukuba ndiyakukhubaza ukhetho lokukhangela, kodwa akukho nto, ayivuleki, kwaye ayongxaki yokutshaja ibhetri.
Phendula MARIO VALVERDE CARDENAS
mario villega sitsho
Ndine iphone7plus. Iqale ukuvala ngokuzenzekelayo kwaye yenza isandi. Indikhupha kule nto ndiyenzayo kwaye iqala ukutshaja. Ungandinceda?
Phendula mario villega
UJuan Manuel Chavez Pinchi sitsho
Ndine-iphone 7 ehlale iinyanga ezi-2, ngaphandle kwesimboli yeapile yavela kwiscreen, yayingu-90% ityala, ndathatha ifowuni yasePeruvia ngesiqinisekiso, bayayijonga nangenxa yokuba yayineenwele eziphantse zingabonakali Inxalenye esecaleni iyalile, ibhetri ibisetyenzisiwe kwaye andinakwenza nto ukuyenza isebenze. ibe fiasco.
Phendula kuJuan Manuel Chávez Pinchi
Kwenzeka okufanayo nakum! Umntu othile nceda ukuba unazo iimpendulo. Ukuhambelana noku, inxenye yealam ayiveli, kwaye ngokucacileyo ayisebenzi.
yise ku-ishop. Bangabasasazi abasemthethweni ePeru kwaye banikezela ngenkxaso ngaphandle kwesidingo sokuba izixhobo zingasebenzi. Iwaranti yonyaka omnye ifakiwe ebhokisini. zama.
Ndiphelelwe ibhetri ndiyidibanisile kwaye ngoku ayindiniki mqondiso wokuvula
Ndine-iPhone 7 kwaye inexesha kunye nemini esetiweyo, kwaye ukuze ibonakale kwiscreen, amaxesha amaninzi ndiyayilayita kwaye andifumani xesha okanye usuku, kuphela umfanekiso ongasemva.
Xa efuna, uvela kwakhona.
Ingalungiswa njani le ngxaki?
USilvia Liliana Campanello sitsho
Molo, ndifuna uncedo, ndine-Iphone 7 dibanisa kwaye ngequbuliso i-wassaps ayikhali
Ndaya kuseto kwaye isandi senziwe sasebenza, andazi, ukuba ndenze ntoni ukuze ndisebenzise kwaye kubalulekile ukuba kuvakale xa kufika isaps.
Ndiyabona ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo inyanga kunye nokutshixa kwavela phezulu
Ndiyathemba ukuba umntu othile angandinceda
Phendula uSilvia Liliana Campanello
mario raul sitsho
Ndine-iPhone 7 kwaye ayifuni ukwenza i-wifi sele ndiyibuyisele kuhlobo lwamva nje lwe-11.3.1 kwaye akukho nto ndihlala eCuba kwaye ndiyakukhumbuza ukuba asinayo ivenkile yeapile kufuneka ndifumane isisombululo kwi-intanethi, nabani na onokundinceda ndiza kukubulela, enkosi
Phendula mario raul
NdinePhone 7 Plus. Xa ndithetha kwiselfowuni yam ivolumu yomntu ofowunayo iphantsi kakhulu, kuya kufuneka ndenze umzamo wokuba ndikwazi ukumamela kwaye nevolumu yeselfowuni yam iphezulu.
UGabriela pignoux sitsho
NdinguGabriela Pignoux, Soloko usebenzisa iphone. Ngoku zimbi kakhulu. Ndineenkathazo ezintathu. Okungakumbi. Ndifuna ukwazi ukuba kutheni i-I7 screen sijike samnyama, kwaye i-flehita ebuyela umva ayiphenduli kakuhle
Phendula kuGabriela Pignoux
Ndine-iPhone 7, iinyanga ezi-2 zokusebenzisa okutsha, icinyiwe kwaye khange iphinde ivule, ndiyibiza kuba bendiphelelwe yibhetri,… ndiyincamile ndifile? Ndifundile ukuba uninzi lwenzekile ... ndiyithumela kwinkonzo? isephantsi kwewaranti ...
Ndine-iphone 7 ivaliwe kwaye iintsuku ezi-2 iscreen siba mnyama, mazanita iyavela kodwa iselfowuni ayikhange iphinde ivule ndiyise kwi-IShop kwaye bandixelela ukuba ibhodi enengcinga yonakele ukuba iselfowuni ayisasebenzi iyasebenza, kufuneka babe nesicwangciso sokulungiselela oku kulimaza q ziingxaki zokuvelisa.
Molo, iphone 7 yam icimile ngokupheleleyo kwaye andinokwazi ukuyivula kwakhona. Ngaba lonke ulwazi, iifoto ziya kulahleka?
Molo ulungile.Ingxaki yam kukuba andinakuhlaziya okanye ndingene kwimidlalo eliqela kunye neeapps ngedatha yeselfowuni kwaye ndizame yonke into, kufuneka ndiqale umbulelo wefektri kuphela
ikhowudi fart sitsho
icima kwaye ixhomeke yodwa rhoqo, ihlala imizuzu emi-3.
Phendula kwi-fart enekhowudi
U-ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ sitsho
Molweni ekuseni, uluvo lwam nge-iphone 7 kukuba icotha kakhulu kwaye ngoku ndinengxaki, bandithumelela i-sms kwaye andinokwazi ukuyivula ukuze ndiyifunde, iscreen sivalelwe kule
imeko kwaye xa ndiyikhulula ukuze ndiyiqale kwakhona kubiza imali eninzi ukuba ihambe kakuhle
Enkosi kwangaphambili kwaye ndilindele ingxelo yakho.
Phendula ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
Ukusukela ngale mvakwemini ukusuka kwi-iPhone 7 yam andiva kwaye ndiyathetha
I-Samsung Galaxy S8 entsha iza kuza nohlaziyo kwi-S Health ukulwa ne-Apple
Amarhe: I-iPhone 6s inkqubo yokutshintsha ibhetri iza kwi-iPhone 6